Isbaanishka oo ka sarreeya Shiinaha Tirada dhimashada coronavirus: – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Isbaanishka oo ka sarreeya Shiinaha Tirada dhimashada coronavirus:
Isbaanishka oo ka sarreeya Shiinaha Tirada dhimashada coronavirus:
Spain ayaa diiwaangelisay in ka badan 700 oo qof 24-kii saac ee la soo dhaafay, taas oo ka badan tirada guud ee Shiinaha tirada guud ee dhimashada, taasoo ka dhigaysa dalka hadda kaalinta labaad ka galay Talyaaniga oo keliya ayaa ka horeeya.
Dalka Spain wuxuu ka iibsaday Shiinaha $ 467 milyan qalab caafimaad si loola tacaalo coronavuris
Dhanka kale, 1.3 bilyan ee India ayaa ku biirey qufulka caalamiga ah ee ka dhashay cudurka dillaacay iyadoo Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) uu walaac ka muujiyay dardar-galinta masiibada Mareykanka. Arbacadii, Ruushku wuxuu kaloo ku amray shaqaalaha aan daruuriga ahayn inay guriga joogaan usbuuca soo socda.
Aqalka Cad iyo hoggaamiyeyaasha guurtida ee labada dhinacba waxay ku dhalleeceeyeen heshiis ku kacaya $ 2 tiriliyan oo lagu qiyaasey shaqaalaha gargaarka, ganacsiyada iyo nidaam daryeel caafimaad oo ay ku xanibeen faafitaanka cudurka coronavirus.
In ka badan 111,000 oo ka mid ah 435,000 ee qof ee laga helay cudurka ayaa ka soo kabsaday, sida lagu sheegay xog ay soo aruurisay Jaamacadda Johns Hopkins. In kabadan 19,000 oo dad ah ayaa adduunka oo dhan ka dhintay COVID-19.
warbixino dheeraad oo ku saabsan wararka ugu weyn maaanta oo
Arbaco, Maarso 25
14:30 GMT – UN Guterres wuxuu yiri ‘tani waa arin midnimada aasaasiga ah ee bini’aadamka’ iyadoo la codsanayo gargaarka
14:20 GMT – Boqortooyada Ingiriiska Johnson waxay u rajeyneysaa Amiir Charles deg deg uga soo kabashada coronavirus
14:15 GMT – Kiisaska cudurka coronavirus ee Dutch ayaa kor u kacay 852 ilaa 6,412, taasoo muujineysa suurtagal ahaan inuu gaabis ku faafo
14:10 GMT – Singapore ayaa soo warisay 73 kiis oo cusub oo ah cudurka coronavirus-ka maalin kasta boodboodka ugu weyn
14:05 GMT – Dubai waxay faraysaa waaxda gaarka loo leeyahay inay hirgeliso shaqo fog fog 80 boqolkiiba shaqaalaha
13:57 GMT – Aasaasaha Wikileaks Julian Assange ayaa maxkamad London ku diidey dammaanad
13:55 GMT- Pakistan ayaa raadineysa $ 1.4 bilyan oo deyn ah IMF si ay uga hortagto coronavirus
13:50 GMT – Boqortooyada Ingiriiska si aad u faahfaahiso gargaarka loogu talagalay is-u-shaqeysteyaasha Khamiista: Warbixin
13:40 GMT – Switzerland ayaa ku fidisay kantaroolka xuduudaha dhammaan waddamada Schengen
13:30 GMT – Putin wuxuu ugu yeeray Russia inay guryahooda joogaan, dib u dhigaan codeynta dib u habeynta dastuurka
13:25 GMT – Dalka Spain wuxuu ka iibsaday Shiinaha $ 467 milyan qalab caafimaad
Isku dey dhicisoobey oo ka dhacey dawlad degaanka Soomaalida